KAOMININA RENIVOHITRA TOLIARA : Vita Sidson Dede no lany ben’ny tanàna vaovao
Araka ny voka-pifidianana navoakan’ny Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny fanjakana dia i Vita Sidson DEDE no lany ho ben’ny tanàna vaovao ao amin’y kaominina ambonivohitr’i Toliara. 13 janvier 2020
Laharam-pahamehana ho an’ny ben’ny tanàna vaovao ao Toliara ity ny fanadiovana tanàna sy fampitomboana ny fidiram-bolan’ny kaominina ambonivohitr’i Toliara.
Tsy maintsy mandroso ny tanànan’i Toliara, hoy izy, ka isan’ny laharam-pahamehana amin’izany ny fampitomboana ny vola miditra amin’ny kitapom-bolan’ny kaominina sy ny fanadiovana ny tanàna. “Hiasa aho ary hanao ny aiko tsy ho zavatra amin’ny hampandrosoana ny tanànako sy tanànantsika iaraha- manana ity, tsy maintsy hiadivana ny gaboraraka, ka hametraka fitantanana tsara isika”, hoy ny ben’ny tanàna vaovao ity.
Ankoatra ny antoko IRD izay nanolotra azy dia olona mpanao asa soa hatramin’ izay izy tamin’ny alalan’ny Fikambanana Toliara Miharo Raiky izay notarihiny, mpandraharaha rahateo koa moa ny tenany. “Misokatra ho an’ny rehetra aho ary vonona hiara-hiasa amin’ny olon-drehetra, misaotra sy mankasitraka ny vahoakan’i Toliara na nifidy ahy na tsia fa ben’ny tanànan’ny vahoaka tsy an-kanavaka ny tenako”, hoy hatrany ity ben’ny tanàna ity.
Mikasika ny mpanolotsainan’ny kaominina kosa dia nahazo mpanolotsaina fito izy ary valo kosa ny fitambaran’ny an’ireo kandida namany hafa, tsy sakana izany fa matoky ireo mpanolotsaina ireo iVita Sidson dede fa tena hitsinjo ny fampandrosoana ny tanànan’ny Masoandro.
Ny zoma lasa teo no namoahan’ny Fitsarana misahana ny ady atao amin’ny fanjakana ny voka-pifidianana ny ben’ny tanàna sy ny mpanolotsaina kaominaly amin’ny fomba ofisialy ho an’ny faritanin’i Toliara. Nanatrika ny lanonana ny Governoran’ny Faritra Atsimo Andrefana Dr Tovondrainy Ranoelson Edally sy ireo olom-panjakana maro samy hafa ary ireo kandida sy ny olon-tsotra.